Dumarka iyo dareenkooda siduu kala yahay
» Dumarka iyo dareenkooda siduu kala yahay
Rag iyo dumarba ninba nin haduu farta ku fiiqo oo qofwaliba isaga isla saxsanaado sow howsha noqon meyso mindi mindi ku taag. Aniga waxan aad isu weydiiyay wax yaabo badan.dad badan ayaan suaalo wey diiyay qaarbaa iyaga ila soo doontey iney wax iiga sheegaan.qofba wuxuu kahadlay waxa asaga dhibey.
1.mid baa waxey tiri aniga waxaan wax dareemaa bishi halmar markaa hadaan waayana waan iska aamusaa ninkeeda ayaa ahaa nin safar badan.
2.midi labaad waxey tiri imaba baahi tiro waa maruu maqanyahay iyo maruu hurdo walibo gabadhan wey oyday markey ii sheegeysay baahida ku gaagaxsan.
3. Midan waxey tiri markan iskhilaafnaba sariirta yuu igeeyaa wax kastoo aan qabeyna ku ilaawaa raaxada nadhexmarta.
4.midan waxey tiri siduu usoo socdo yuu dakarkiisa la aadaa farjigeyga raaxo aan arko daaye xanuun baan ka qaadaa ee waxaa kafiicnaa ninkeygi hore oo markuu meel walbo iga gacan mariyo oo aan kax taaganahay ii galmoon jirey.
5.midan iyana waxey tiri waxaan guursaday laba nin waxaan xor unoqon waayey sidan jeclahay inaan sheegto.kadib waxan helay bey tiri nin wax fahamsan wareysta weydiiya sida ay jeceshahay una sheegay hadey wax sheegan weydo in aysan heleyn raaxo iyo farxad waxey tiri waxaan helay baadideydii waxaa taam noqotay nolosheydii.
Aniga waxaan qabaa marka hore dumarka ha aaminaan iney baahi rabaaniya jirto sababtu ugu weyne guurka kadanbeysaa taa tahay. dumarka somaliyeed xanuunka aan daawada laheyne hayaa waa qarsashada waxa ay dareemayaan.Dawadeena waa inaan qiranaa waxa aan ubaahannahay taas ayaa keeni karta isfahan.marka horana guurso qofaad jeceshahay.Guurka hortiina hala iska ilaaliyo meela galgalka waayo waxaa laga yaa baa inaad kuqanci weydo taad guursato.dhibaatooyinka qaar umadahaba weynala qabaan.Ragi hadey raaxo maleh dumarkeeni lasoo istaagaan. Dumarkiina cadaan iyo ajnabi guursi aadeen qiilna kadhigtaan rageena maya garanayaan raaxada cusub. Maxaa inoo xala? ===================================================================Waxaa qortay Runsheeg dumar wuxuu ahaa commenti waxaan ka dhignay Maqaal waayo waa hadal qiime badan oo ku sallaysan qibrad Talo haddii aad u baahan tahay booqo maamulka talooyin
kohsh4/28/2011ahaahahah markays kushegaysay in ninkeeda sifican ugu raxayn maxay a oyday ahahahahah bloody hell man thatz bollshitReplyDeleteAnonymous8/23/2011waxaan ku dari lahaa raga soomaaliyeed haka soo bexeen masuuliyadooda oo ha u dabacsanaaden dumarkooda si ay u helaan kalsooni ay wax ugu sheegi karaan ,hadii noloshiiba noqoto boob iyo jikaar raaxo lama helayo .dumarkuna haku kalsoonaaden ragooga oo cuqdqda ha iska saareen hana shaagtaan baahidooda si noloshu u quruxbadnato gaalana looga badbaado.ReplyDeleteAdd commentLoad more...